Ukukhulelwa: kanjani ukugwema inkinga?
Isikhathi sokubeletha somama esizayo yisikhathi esihle kakhulu nesethenda lapho kudingeka ukuba acabangele ezinye zokuvimbela ukuvikela ingane yakhe. Ngakho, ukukhulelwa: kanjani ukugwema inkinga - isihloko sezingxoxo zanamuhla.
Kuzodingeka ukuyeka lezo noma ezinye imikhuba emibi, ngoba ingane izodinga ukuthuthukisa umzimba oqinile futhi ophilile, ongathinteki ngezinto eziyingozi noma izifo. Kodwa-ke, kanti abanye, ekuboneni kuqala, imikhuba engenabungozi ngesikhathi sokukhulelwa kungaba yingozi. Yini okufanele yenziwe (noma kunalokho, okungafanele ukwenze) kumama ozayo ukuze alondoloze impilo yengane yakhe?
Ukubhema, kokubili okusebenzayo nokungenzi lutho, kungaholela ekuthuthukiseni kwe-anomalies yokuzalwa engafanele kanye nezinkinga. Ngaphezu kwalokho, ingane ingaba nesisindo somzimba, ngakho-ke kuyadingeka ukuba ushiye ngokuphelele ugwayi ngesikhathi ukhulelwe. Kubalulekile ngisho nokugwema noma yiziphi izindawo zomphakathi lapho kuvunyelwe ukubhema. Uma othile ovela ekhaya wakho ebhema, bacele ukuthi bangakwenzi ekhaya (ngisho nasekhalini). Zivikele ngokuphelele ugwayi, ikakhulukazi ezinkathini zokuqala zokukhulelwa.
Ukuphuza utshwala ngesikhathi ukhulelwe kungabangela isimo se-embryonic alcohol syndrome. Le syndrome ibangelwa ukuguqulwa kwesisu somntwana, ukuphuza kwengqondo nezinkinga zenhliziyo. Utshwala kaningi lubangela ukwakheka kwe "hare hare" nokulunywa okungalungile, kanye "nomlomo wephunga." Ngokwezibalo, phakathi kwabantwana abanomama abaphuza utshwala, amaphesenti amakhulu kunazo zonke izingane ezingaphambi kwesikhathi nezincane. Yebo, kanye nezinsana ezizalwa ngokuhamba kwesikhathi kunezinkinga eziningi - izinkinga zamapayipi, inhliziyo, isandulela-ngculazi esincane.
Umama wesikhathi esizayo kufanele adle ukudla okuhlanzekile okuphilayo kuphela ukuze agweme inkinga. Phela, noma yiziphi izithasiselo nezibulala-zinambuzane, kungakhathaliseki ukuthi yiliphi igama, zingalimaza kakhulu ingane. Owesifazane udinga ukulingana kakhulu nokuthi uyadla kuphi. Kwabesifazane abakhulelwe, kumele kube khona i-taboo yokudla okusheshayo okuhlukahlukene, ukudla okulula okuhambayo ekugijimeni, ukudla okuvela kwimikhiqizo eqedile. Ayikho into yokudla okunempilo (ngakho-ke ingane enempilo) ayikho.
Ukwamukela noma yimiphi imithi yabesifazane abakhulelwe ngaphandle kweseluleko sezokwelapha ngaphambi kokuba kuvunyelwe ngokuphelele! Ungakholelwa konke okushiwo ekukhangiseni ku-TV ngisho nakulokho okulotshwe eminye imiyalelo. Khumbula: noma nini, imithi iyingozi kumntwana. Kunezindlela ezihlukene zokubeka ingozi. Ku-trimester yokuqala, noma yiziphi izidakamizwa ezivinjelwe! Kukhona ukubeka kwezitho ezibalulekile zomntwana, kanti izidakamizwa zingaphazamisa le nqubo. I-trimester yesibili kule ndaba iyona "ephephile" kakhulu, kodwa ngisho noma kunjalo kukhona uhlu oluncane lwezidakamizwa ezivunyelwe futhi kuphela ngaphansi kokuqondiswa udokotela. Esikhathini sesifo, ochwepheshe banamuhla bancoma abesifazane abakhulelwe ukuba basebenzise izindlela zokwelapha zemvelo: izithelo, amakhambi (futhi ngokucophelela) nemifino.
Odokotela manje ngokwabo bacela abesifazane abakhulelwe ukuthi bangazitholi emidlalweni ye-X. Ngaphambili kwakukholelwa ukuthi isifinyezo, isibonelo, samazinyo, asilimazi ngesikhathi sokukhulelwa. Kodwa-ke, namuhla umphumela omubi wezinkomba zomzimba ebusweni kuye kwafakazelwa. Okuyingozi kakhulu i-X-ray ekuqaleni kwezigaba zokukhulelwa.
Gwema izinga lokushisa eliphezulu.
Akukhona nje ngokushisa ngesikhathi sokugula. Kufanelekile ukunciphisa noma ukwenqaba ukuthatha ibhuku lokushisa futhi ukhohlwe ngokuphelele ngokuya ku-sauna. Ngisho nemilenze ehambayo ngesikhathi sokukhulelwa ayinqatshelwe. Konke lokhu kungabangela ukukhulelwa kwesisu noma ukubeletha ngaphambi kwesikhathi. Esikhathini esishisayo ehlobo, futhi, kufanele uqaphele ukukhulelwa kwakho, ungagwema izinkinga ngaphezulu.
Odokotela bathi ngisho nengozi enjalo futhi ethandwa yiziphuzo eziningi, njengekhofi, kungabangela ukukhulelwa kwesisu nokuphazamisa isisindo somntwana kubesifazane abakhulelwe. Futhi, i-caffeine ingaholela ekunciphiseni emzimbeni wezinga lamanzi le-calcium kanye nomswakama, okuthinta ukuthuthukiswa kwe-embryonic.
Ngendlela, kuyasiza abesifazane ukuba bazi ukuthi i-caffeine ayikho nje kuphela ikhofi, kodwa futhi ku-cola, itiye, iziphuzo zamandla kanye ne-chocolate. Qaphela ngale mikhiqizo.
Gwema ukuxhumana namakati.
Yebo, waqonda konke ngokufanele. Amakati athatha isifo esinjalo njenge-toxoplasmosis. Kubangela izilonda ezimbi ezinyangeni zokuqala - ukungalungi kokuzalwa kwangasese kanye nokukhubazeka kwe-fetus, ukuthuthukiswa kwamalungu, ukungahloniphi, ukukhulelwa kukhula. Uma unesilwane (ikakhulukazi uma ehamba ngokuhamba), kungcono ukucela izihlobo noma abangane ukuba banakekele okwesikhashana.
Ungalahlekelwa ukudla kwakho.
Ngesikhathi esibalulekile njengokukhulelwa, ungakwazi ukugwema izinkinga ngokulandela ngokucophelela ukudla kwakho. Kufanele ukhiphe ngaphandle kwemikhiqizo elandelayo kusuka kwimenyu yakho:
Ushizi ocolekile - awugcini kahle, ngakho ungaqukatha ama-parasites we-intracellular (amabhaktheriya we-genre Listeria).
Inyama enomsoco (inhlanzi eluhlaza) ngokuvamile iba yithwala yokutheleleka nge-mercury.
Ukudla amaqanda aluhlaza kungabangela ukutheleleka nge-salmonella.
Kumele futhi uqaphele ukusetshenziswa kwakho kosawoti futhi kumnandi. Ukweqa ngokweqile kuvame ukubangela izinkinga ngokuthuthukiswa kwengane.
Indlela yokuphatha i-cystitis ngesikhathi sokukhulelwa
Izimpawu zokuqala zokukhulelwa
I-toxicosis esemuva ngesikhathi sokukhulelwa, kunokuba ihambisane nayo
Ukukhulelwa nokubeletha kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni
Yikuphi okungeke kwenzeke ukwenza noma ukwenza kubesifazane abakhulelwe? Ingxenye 1
I-Horoscope Yothando ngo-2015 ye-Sagittarius
Yikuphi okugeza okumele ukhethe?
Ngokuphumelelayo ngokuphumelelayo. Indlela yokuthuthukisa ukusebenza?
Ukwazisa uKhisimusi: ukubhula ngoKhisimusi ekugeza
Indlela yokubuyisela imizwa yentombazane kumfana?
Ukunakekelwa kahle izicathulo
Indlela yokubala isilinganiso sekhalori nsuku zonke
Ngesonto ngaphambi kokufa okungazelelwe, indodakazi kaLyudmila Gurchenko yahlangana no-Andrei Malakhov
Indlebe ye-pepper elimnandi ne-cod
Ukucindezeleka kwamaphosta, ukuwugwema kanjani?
Eholidini ehlomile ngokugcwele, noma izingubo zazo zonke izikhathi
Izizathu zokuthi kungani indoda ingabhalisi umshado